U-Yana Rudkovskaya usebenza kubantwana bakaFilipu Kirkorov
Iziganeko ezibalulekileyo zonyaka omtsha zashiywa ngasemva, kunye neenkwenkwezi zaseRashiya zagijimela ekuphumleni. Omnye uhlala e-Maldives, umntu uyonwabela e-Courchevel, noFilipu Kirkorov bakhetha ukuya kwi-Disneyland.
Kwiphepha lakhe kwi-Instagram network, umculi wabelana ngeendaba ezizayo ngokubeka isithombe sakhe noMickey Mouse. Kuyathakazelisa ukuba ingubo yenkwenkwezi yaseRashiya yintandokazi kakhulu kwi-T-shirt, apho iKirkorov ihamba khona ngeMelika, umfanekiso weVladimir Putin uboniswe.
Abalandeli beemvumi babeqinisekile ukuba ngekhefu wahamba kunye nabantwana bakhe - u-Alla Viktoria noMartin, ngokukodwa kuba abafana bebeye bahamba ngokutsha kunye noyise eSochi. Nangona kunjalo, kwenzeka ukuba uFilip Bedrosovich wanquma ukuziphumla, waza washiya abantwana bakaJay Rudkovskaya noVeveni Plushenko:
Ngubani omnye onokumthembayo ukuzonwabisa no-Alla-Victoria noMartin ngokungabikho koPapa? Nguye kuphela umhlobo wam olungcono @rudkovskayaofficial ne-Snow King!
Abahlobo ngokuziphendulela beza kwimimiselo baze balethe uAlla Victoria kunye noMartin ekuboniseni kwakhe "INkosi yeSiqhwa. Buyela. " UVeveni Plushenko emva kokusebenza kwathatha abafana emva kwendawo, apho kwakukho ibhere elikhulu.
Lev Durov wafa
UXenia Borodina uthetha ngomyeni wakhe
UZemfira wabika ngeholide lokugqibela
Abathathi-nxaxheba beNdlu-2 ngaphambi kokulandela uphando lweplastiki, ifoto
Ukupheka kwekhalori ephantsi kunye nomxholo wekhalori
Isaladi kunye nama-persimmons kunye namantongomane
Indlela yokufumana umsebenzi ukuba ungaphezu kwama-50
I-Pasta eneklabishi edala
Ukukhethwa komgubo wokuhlamba umatshini